Iimpawu zeBillet Hot Traging Furnace kunye nokufakela ukutshisa iibhentshini
Ikhaya / Ukuchithwa kweFranna / Iinyithi zeBillet eziShushu eziQhelekileyo zoMlilo
iindidi: Ukuchithwa Kwakha iFurnace, Ukuchithwa kweFranna tags: i-aluminium billet, i-aluminium eshushu isithando somlilo, billet eshushu, I-Billet Hot Forging Furnace, i-billet iyatshisa i-furnace, ubhedu obushushu obushushu, ukuqulunqwa kwebillet ukutshisa, ukutyumba okutshisa, Ukufakelwa kweBillet Hot Hoting, Iimali zeBlue Hot Forging Furnace, isinyithi eshushu
Iimpawu zeBillet ezitshisa ukutshisa iHitrice kunye ne-Induction yokutshisa iibhayili / i-aluminium / i-billets yensimbi ngaphambi kokutshisa
Ukutshisa ukutshisa iqeshwe ngokubanzi kwizinyithi ze-billet ezitshisa ukushisa i-billet ukutshisa i-billet eya kubanjwa ngokutshisa. Kwimashishini esebenzayo yensimbi, izitshixo zokutshisa ezitshisayo zitshisa kumaqondo afudumele apha nge-1000 oC-1250 oC ngokubhekiselele kwimixholo yekhabhoni kunye neengxenye zokubambisa. Inkqubo yokutshisa okutshisa idinga ukufudumala kweqondo lokushisa kwe-billet ngokufanayo ngokubini kwinqanaba eliphambene nomgca we-billet. Ngokuqhelekileyo ukushisa kokuqala kwebillet kusebushushu bendawo kwaye kuyadingeka ukushisa ngaphezu kweqondo lokufudumala kwe-recrystallization ye-process setting. Kukho iindlela ezahlukahlukeneyo zokutshisa izityezelo ekutshiseni okutshisayo kuquka ukufudumala kwe-induction, igesi yatshisa ilithana, i-oyile ishenxiweyo, i-heater infrared kunye ne-heater resistant heater. Ukufudumala ukushisa kunamathuba amaninzi ngaphezu kwezinye iindlela zokufudumala ngokutshisa. Okokuqala, ukuchithwa kweendlela zokutshisa i-heatproduction systems kudala ukushisa okukhulu ngokukhawuleza kwinqanaba lentsimbi. Ukongezelela, iindlela zokushushumbisa iinkqubo ziqalisa iinkqubo ngokukhawuleza, kuba ezi nkqubo azidingeki ukuchitha ixesha lokutshisa i-furnace. Kwakhona, ixesha lokufudumala lincinci ngokungahambisani nenye indlela. Xa kuthelekiswa nokushisa kwe-gas kunye neoli, ukulawula nokuphindaphinda imeko efanayo yokufudumala kwexesha elilula kulula ukuyifumana. Ukuzenzekelayo kungasetyenziswa kwiinkqubo zokufudumala zokufakelwa. Kuya kufuna indawo encinci yeevenkile. Ukutshisa ukutshisa Kananjalo kunamandla okomeleleyo kunye nobume bendalo. Akuyi kuba nayiphi na ingozi yokutsha kwefuthe kwimo esingqongileyo njengotshisi yegesi kunye neoli. Ukongezelela ngakumbi umphumo wegesi okhutshwe ngumbane kunye nekhwalithi yomgangatho ongapheliyo ngenxa yokubunjwa kwesikali. Ukufudumala kwe-induction inikezela ngokunciphisa ukubunjwa kwesikalo kunye nokuhlaziywa kwi-billet evuthayo.
I-Parameter yesinyithi billet eshushu isithandathu somlilo:
Kwi-induction yinyithi billet eshushu isithandweni somlilo yonke i-billets okanye i-slug ishushu. Ngokuqhelekileyo iibhentshana ezimfutshane okanye i-slugs i-hopper okanye isitya isetyenziselwa ukuzenzekela ngokuzenzekelayo iibhentshini kumgca we-pinch rollers, iiyunithi eziqhutywe ngethungatha okanye kwezinye iimeko zengxowankulu ye-pneumatic. Iibhentshini ziya kuqhutyelwa ngekhoyili enye emva komnye kumilala ekhuhliweyo yamanzi okanye iiperamic liners zisetyenziselwa nge-coil bore eyanciphisa ukutshatyalaliswa nokukhusela ukugqoka. Ubude bekhoyili ngumsebenzi wexesha elifunekayo, ixesha lokujikeleza ngalinye kwicandelo kunye nobude billet. Kwimigangatho ephakamileyo yamanqamlezo asebenzayo akuqhelekanga ukuba i-4 okanye i-5 ikhoyili kwinqununu ukunika i-5 m (16 ft) yekhoyili okanye ngaphezulu.